Lapho injini yemoto isebenza, izinga lokushisa kwegesi ngaphakathi kwamasilinda alo lifinyelela kumadigri angu-2000. Ngenxa yalokhu, kukhona ukushisa okunamandla kwamagumbi okusebenza ngamagesi. Ukuze kuguqulwe ukushisa okungadingekile kusuka injini, umshini unesimo sokupholisa. Kodwa ukuthi kuzosebenza ngempumelelo kanjani kuxhomeke kwikhwalithi kanye nezici ze-coolant esebenzako (OJ). Leli ketshezi libizwa ngokuthi "i-antifreeze". Futhi njengazo zonke ezinye izinto zokusebenzisa imoto, kudinga ukushintshwa ngezikhathi ezithile.
Ngivame kangakanani ukuguqula i-antifreeze emotweni? Impendulo yalo mbuzo ayikwazi ukungaqondakali, ngoba isikhathi sokufaka esikhundleni sincike eziningana zezici:
Izincomo zabakhiqizi be-antifreeze.
Izincomo zabakhiqizi bemoto.
Ukuqina komshini wokusebenzisa.
Izigaba zokugqoka kwesistimu yokupholisa.
Izincomo zomkhiqizi we-antifreezes
Izwe ngalinye elihlotshaniswa nembonini yezimoto likhiqiza okupholile, liholwa izindinganiso zalo ezamukelekile. I-antifreeze enjalo kuphela ihamba futhi yokuthekelisa. Ngakho-ke, emashalofini ezitolo zezimoto ezinjalo ezahlukeneyo zokupholisa iziphuzo ezinezimpawu ezahlukene, nezici zazo nokuphila komsebenzi.
Ukuze ngandlela-thile ihlele isimo, abakhiqizi be-antifreeze baqala ukusebenzisa ukuhlukaniswa okusetshenziswa yiVolkswagen ngemikhiqizo yabo, okwahlukanisa izikhukhula zibe ngamakilasi amathathu ngezinsuku zabo zokuphakanyiswa eziphakanyisiwe: G11, G12, G13.
I-G11 (yendabuko) - leli klasi lihlanganisa ama-antifreezes akhiqizwa yi-technology okuthiwa i-silicate. Okungukuthi, eziketsheni zokupholisa okule nkinga, kunikezwa izithako eziyinkimbinkimbi ze-silicate, ezivikela indawo yangaphakathi yezakhi zensimbi zesimiso sokupholisa kusuka ekubhubhiseni.
Ukuboniswa ukuthi kubalulekile kangakanani ukushintsha isigaba se-antifreeze G11, kufanele kube kuphakheji. Kodwa-ke, uma usebenzisa i-antifreezes yalesi sifundo, kufanele kukhunjulwe ukuthi ngokuhamba kwesikhathi uhlaka oluvikelayo olwenziwa yibo luyehla, lube yizinhlayiya eziqhekezayo ezilimaza uhlelo lokupholisa. Ngakho-ke, isigaba se-antifreeze G11 kufanele sishintshwe okungenani njalo eminyakeni emibili.
Kuthiwani ngo-G12? Lokhu kufakazela ukuthi kungakanani ukushintsha? Impendulo yalo mbuzo ixhomeke ekutheni indawo eyakhiwe yenziwa kanjani. Uma uhlelo lokupholisa lwemoto lwaluhlanziwe ngaphambilini futhi lwomisiwe, impilo ye-antifreeze entsha izoba iminyaka engu-5. Uma ngabe uhlelo aluzange lucwecwe, uketshezi lwawo lwagcwaliswa ngesikhathi sokusebenza, bese impilo yokusebenza iyancipha ibe yiminyaka emithathu.
Ukuphila komsebenzi we-G12 antifreezes kwanda ngenxa yokuthi basebenzisa izithasiselo ezisekelwe kuma-acids carboxylic asebenza ngokuqondile emthonjeni wokubola, ngaphandle kokwenza ungqimba oluvikelayo.
Esikhathini se-G12 + se-antifreeze, izithasiselo ezingavumelekile zengeziwe ezingxenyeni ezikhona kakade, nasemaminerini amaminerali ama-additives G12 + - amaminerali. Zonke lezi zithasiselo zithuthukise ukuvikelwa kwesistimu yokupholisa, kodwa azizange zithinteke isikhathi sokufaka esikhundleni.
Ukuphila komsebenzi we-G13 istiferedze kufana ne-G12 epholile (ngokuya emithethweni efanele yokufaka esikhundleni), esukela eminyakeni engu-3 ukuya kweyesi-5.
Kumele kuqashelwe ukuthi ukufakelwa isisindo salesi sifundo kunenani eliphakeme ngenxa yokuthi isisekelo salo sine-polypropylene engokwemvelo. Azikho ezinye izinzuzo ngaphezu kwe-G12 ++.
Abashayeli abaningi bakholelwa ukuthi i-antifreeze iyindlela ehlukile yokupholisa, ehlukile ezinhlotsheni zendabuko zokugaya amanzi , kodwa akunjalo. I-Tosol iyinhlangano eyakhiwe yizinkampani zasekhaya "I-Technologies ye-organic synthesis". Yingakho igama, elitholile elipholile. I-CBT yisifushaniso esivela kunjiniyela, futhi ukuphela kwe- "OL" kuyisibonakaliso sokungena kotshwala kotshwala. Phakathi nenkathi yeSoviet, kwakungekho isidingo sokuba ilungelo lobunikazi laleli gama, ngakho-ke cishe zonke iziphuzo zokupholisa ezihamba ngezimoto ezikhiqizwa e-USSR, bese kuthi eRussia, kuthiwa zifanayo - "i-Tosol", okuyinto empeleni, i-antifreeze yasekhaya.
Ziningi kangakanani ukushintsha i-antifreeze, kuboniswa ngokujwayelekile emaphaketheni ngumenzi. Ukuphindaphinda kokushintshwa kwekhaya eliphansi, njengombuso, akudluli iminyaka emibili.
Izincomo zabakhiqizi bezimoto zokufaka esikhundleni se-coolant
Izincomo ezijwayelekile ezivela kubakhiqizi bemoto esihlokweni esithi "Kwenzeke kaningi kangakanani ukuguqula i-antifreeze emotweni" akunjalo, inkampani ngayinye ifika kulo magazini ngaphandle komuntu siqu, kuye ngokwenzekayo. Ngakho-ke, isibonelo, iVolkswagen, i-General Motors, i-Mazda, i-Renault ngemuva kokuba imishini ikhishwe emgqeni wendibano futhi i-fuel refueling yesistimu yokupholisa i-antifreeze ngokuvamile inconywa ukuba ingashintshi i-coolant, ibeka isikhathi sayo sonke isikhathi. IsiJalimane "Ford" sakha izinkathi zokufaka indawo yokugcoba imoto emotweni yazo yonke iminyaka engu-10 noma emva kwezinkulungwane ezingu-240 zezinkampani zokugijima. "Mercedes" - iminyaka engu-5. "BMW" ne "Mitsubishi" - iminyaka engu-4. I-VAZ onobuhle bayo inquma isikhathi sokuguqulwa kwe-antifreeze ku-75 000 km.
Futhi esikhathini esizayo ukuguqula i-antifreeze kunconywa okufanayo, okwakubanjwe emotweni efektri. Uma ngesizathu esithile akunakwenzeka ukucacisa ibanga lokuqala lokupholisa, kungcono ukugcwalisa i-antifreeze ye-G12, okubhekwa njengayo yonke indawo, ngaphandle kokukhohlwa ukuhlanza uhlelo lokupholisa.
Ukuxhomekeka kwe-periodicity yokushintshwa kokufakelwa kwesibindi kumakhilomitha omshini
Igama lokushintshwa kwe-antifreeze futhi lixhomeke ekutheni imoto isetshenziswe kangakanani. Emva kwakho konke, isikhathi esifanayo sesikhathi abanikazi bezimoto abahlukene bangahamba ngezindawo ezahlukene. Ngakho-ke, kaningi kangakanani ukushintsha i-antifreeze emotweni, ngokuqondile kuthinta i-mileage yayo. Kule akhawunti, kunezincomo ezijwayelekile zokufaka esikhundleni. Ngakho-ke, i-antifreeze yasekhaya kanye nama-cooler-g11 anconywa ukuba ashintshwe njalo ngamakhilomitha ayizinkulungwane ezingu-30. I-antifreezes yeklasi eliphakeme kufanele ishintshwe ngemva kokuhamba kuka-40-50,000 km. Yilezi zingqimba ezibhekwa njengezibalulekile, emva kwalokho i-OJ iqala ukulahlekelwa izindawo zayo zokuzivikela. Kodwa futhi, lezi yizincomo kuphela, njengoba imigomo yangempela yokufaka indawo okudingekayo yokufakelwa kwesibindi, ngokuyinhloko kuncike ekungenikeni kwesistimu yokupholisa imoto.
I-antifreeze ngokuvamile ishintshwe kumajini aphelile
Uma imoto isesandleni sesibili, khona-ke, isimo se-injini yayo kanye nezinhlelo ngeke kube kuhle kakhulu. Ngakho-ke, isikhathi sokufaka esikhundleni sokuphefumula kumishini enjalo sizohlukana nalokho okukhulunywa ngakho. Ngingayithola kanjani ukuthi ngabe i-antifreeze egcwele kakade isasebenza yini, ngishintsha kangaki umshini ophuzile kumishini enjalo?
Ukuze unqume izinga le-antifreeze ezitolo zezimoto zithengisa amathrekhi okuhlola akhethekile. Izindleko zabo zincane, kodwa ukulawula ikhwalithi yokupholisa kuyasiza kakhulu. Ukuze wenze lokhu, umhlubu wehlelwa phansi, futhi emva kwalokho imibala yezinkomba ifaniswa nesilinganiso esikhishwe ku-kit yokuhlola.
Isimo se-antifreeze singanqunywa ngokubonakalayo. Uma okupholile kunamafu noma kumhlophe (umbala olahlekile), lokhu kuyisignali yokuqala ukuthi ilahlekelwa yizindawo zayo. Uma i-antifreeze iphenduka ensundu (ingcolile), lokhu kusho ukuthi kunezinhlayiya zokugqwala kuwo, awukwazi ukukudonsa ngokufaka esikhundleni. Uma i-foam ibonakala ethandeni lokunweba, futhi phansi kwayo ihlanganiswe noqweqwe lwezinhlayiya eziqinile, ngakho-ke akunakwenzeka ukudonsa okuningi ngokufaka esikhundleni, i-coolant kufanele ishintshwe ngokuphuthumayo, ngokuhlanza okudingekayo.
Ngaphezu kwalokho, i-antifreeze izodinga ukushintshwa ngesikhathi sokuqala, uma ihlanjululwe ngolunye uhlobo lokupholisa noma amanzi, ngoba izici zalo zinciphile kakhulu.
Token - Iyini?